Soavinandriana Mandrindrano Synodam-paritany faharoa nahazo fiofanana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Taorian’ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny filohan’ny FJKM Irako Andrimahazosoa Ammi sy ny Tale Jeneralin’ny CNaPS Arizaka Rabekoto Raoul dia tany Soavinandriana Mandrindrano no toerana nanatanterahana ny andiany faharoa amin’ny fiofanana momba ny fiahiana ara-tsosialy. ny tale jeneralin’ny Cnaps no nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fiofanana tany an-toerana. Nanotrona azy tamin’izany ny mpikambana eo anivon’ny toniam-pitantanana Rasoanaivo Didier izay talen’ny fenitra sy ny fikarohana eo anivon’ny Tahirim-pirenena.
Niompana tamin’ny zo arak’asa sy ny zo araka ny fiahiana ara-tsosialy ny fiofanana. Noresahina ny adidy tokony ataon’ny mpampiasa, ny andraikitra tokony ataon’ny mpiasa, ary ireo karazana zo azon’ny mpiasa amin’ny asa ataony.
Adidin’ny mpampiasa. Ao anatin’izay adidin’ny mpampiasa amin’ny fiahiana ara-tsosialy izay ny fampidirana mpikambana Cnaps ny mpiasa iray 15 andro aorian’ny nandraisana azy ho mpiasa. Eo koa ny fanambarana filazan-karama eny amin’ny Cnaps isaky ny telovolana, , ny fanefana ny latsakemboky ny mpiasa ara-potoana sy ara-dalàna .
Sokajy omen’ny Cnaps. Fa nampianarina ireo mpandray anjara koa ireo sokajy telo amin’ny fitantanan’ny Cnaps ny lafiny ara-tsosialy dia ny fanampiana fianakaviana, ny fanampiana raha tra-doza ny mpiasa, ary indrindra ny fisotron-dronono “satria na dia mpitandrina aza izy, dia mety manan-janaka, mety ho azon’ny loza eo am-panatanterahana ny asany ary tahaka ny olombelona rehetra dia ho antitra ka mijanona tsy afaka manao izany asa izany ka mendrika ny higoka ny nisasarany amin’ny alalan’ny fisotron-dronono tahaka ny olona rehetra” hoy Andriamatoa Randrianarijaona Charles Emilson izay isan’ny mpampiofana avy eo anivon’ny Cnaps.
Ny tanjona dia ny mampahafantatra ny olona sy mahatonga ny olona hiditra mpikambana Cnaps satria misy ny zo tokony ho an’ireo mpitandrina ireo. “Ny olana mantsy mahatonga ny fahaverezan-jo dia ny tsy fahafantarana ny didy aman-dalàna mikasika ny asa sy ny fiahiana ara-tsosialy” hoy pasitera Andriamanampisoa Herman Gideona, prezidà synodalin’i Soavinandrina Mandrindano. Koa zava-dehibe ny fisian’izao fiaraha-miasan’ny Fjkm sy ny Cnaps izao satria mitsinjo ny mpiasa sy ny vady aman-janany ary mitsinjo ny hoavy any aoriana ihany koa. Nambarany fa “tena ara-tsoratra masina mihitsy ny fiahina ny maha olona, izany hoe tsy mifanipaka amin’ny maha FJKM”
Betsaka ny loza ara-tsosialy mety hanjo ny mpiasa eo anivon’ny sehatry ny fiangonana Fjkm. Ka izany indrindra no maha zava-dehibe ny fidirana mpikambana Cnaps mba hafahan’ny mpiasa mahazo ny fiahiana ara-tsosialy.
Mila fangatahana. Ankoatry ny fampahafantarana ny didy aman-dalàna dia nisongadina nandritra ny fanofanana ihany koa fa ny fanampiana rehetra omen’ny Cnaps dia mila hanaovana fangatahana avokoa, efa misy ny antontan-taratasy voatokana amin’izany eny anivon’ny biraon’ny Cnaps sy ny rantsamangaikany manerana ny Nosy. Anjaran’ny mpiasa ny mameno izany ary koa ny manatitra ara-potoana ireo antontan-taratasy hahafahana mandray ny zo : ohatra ny ny fanamarinam-pahavelomana ho an’ny zokiolona mpandray fisotron-dronono na certificat de vie. Efa tapitra tamin’ny faha 31-n’ny volana martsa teo izy io raha ny tokony ho izy saingy ho fitsinjovana ireo zokiolona mbola tsy nahatanteraka izany dia nohalavaina hatramin’ny faha-28n’ny volana jolay 2017 izao ny fe-potoana farany anavaozana sy anaterana ny antontan-taratasy ilaina amin’ny fitohizan’ny zo : izay averina ihany fa dia ny fanamarinam-pahavelomana ho an’ny mpandray fisotron-dronono ary ny fanamarinam-pahavelomana sy ny fanamarinana fa tsy niverina nanambady ho an’ireo vady navelan’ny maty.
Mikasika ny fanampiana ny fianakaviana dia isan’ny antontan-taratasy hitohizan’ny fandraisana ny zo ohatra ny certificat de scolarité izay manamarina fa mianatra ilay zaza. Ny fisian’ireny antontan- taratasy ireny dia manentana ny tokantrano ho ara-dalàna eo anivon’ny fiarahamonina.
Nankasitraka ny Cnaps noho izao fiofanana izao ny Pasitera Ranorosoa Hanitra Clara Blondine satria amin’ny maha vehivavy ny tenany dia fantany nandritra ny atrikasa fa tsy diso anjara izy amin’ny volan’ny bevohoka sy ny mpitaiza kely. Ireny fanampiana omen’ny Cnaps ireny dia manampy betsaka ny fianakavian’ny mpiasa amin’ny fiainana andavanandro.